Fisavana teny an-dalambe :: Voasakana ireo fiarakaretsaka sy taksibe • AoRaha
Fisavana teny an-dalambe Voasakana ireo fiarakaretsaka sy taksibe
Niatrana vao maraina teny an’arabe ny polisy avy ao amin’ny kaomisarian’ny polisy eny Ambohimanarina, omaly, nanao hetsika ho fijerena ny fiara iombonana mbola mitondra olona, izay efa voarara taorian’ny fanambaràna nataon’ny Filoha Rajoelina Andry, ho fisorohana ny fiparitahan’ny aretina “Coronavirus”.
Nisy ireo fiarakaretsaka sy taksibe tratra nitondra mpandeha. Nalaina avy hatrany ny taratasy fahazoandalana teny amin’izy ireo. “Tsy nisy takelaka ireo fiarakaretsaka voasakana. Milaza ho mahafantatra ny tsy fahazoany mitondra olona ny mpamily saingy minia manao izany. Tahaka izany ihany koa ny mpamily taksibe sy ireo mpandeha. Nisy taksibe tratra nitondra olona marobe”, hoy ny polisy eny Ambohimanarina.
Tsy nahazoana tatitra ny isan’ireo fiara voasakana teny amin’iny faritra Ambohimanarina iny noho ireo mpitandro filaminana mbola miparitaka manao ny asany. “Rehefa mahaloa ny volan-tsazy ireo mpamily vao haverina ny taratasin’ny fiara”, hoy ihany ny polisy.
Fahamaizana tsena :: Kilan’ny afo ny fivarotana iray tetsy Analakely